18 84 Red Brick Cottage - I-Airbnb
18 84 Red Brick Cottage
Marquette, Iowa, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Pat
Ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, sithatha izinyathelo ezengeziwe ukuqinisekisa ukuphepha kwabaqashi bethu. Hlehlela emuva nesikhathi edolobheni elincane elithulile e-Iowa, eliphakathi kwamagquma endawo engenasici. Isikhathi sibonakala simile ngenkathi ulapha. Indlwana Yezitini Ezibomvu engu-1857 inikeza amakamelo okulala angu-3+ endaweni enokuthula, eduze nemisebenzi engasemfuleni, i-casino kanye ne-downtown Marquette. Igceke elivulekile negceke eliseceleni, indlu inefenisha ephelele futhi ihlanganisa i-firepit kanye ne-grill yegesi yemisebenzi yangaphandle yasebusuku.
Indlu iza nefenisha ephelele, kuhlanganise nomshini wokwenza ikhofi, i-toaster, i-microwave, umshini wokuwasha/wokomisa, amabhodwe namapani, izitsha, izitsha zokupheka, umshini wokomisa izinwele, i-ayina, i-grill yangaphandle yegesi, izihlalo zotshani, indandatho yomlilo enephakethe elincane lezinkuni, izinduku zensimbi zokugcoba izilwane zasolwandle/izinja ezishisayo. Kukhona i-croquet, amahhashi kanye namasethi e-badminton atholakalayo.
Indawo ezungeze amadolobha amakhulu enokuthula enedayimane le-baseball nenkundla yokudlala izindlu ezimbili phansi. Umzila wokuhamba oseduze, i-casino nomfula ophambi kwamamayela angu-1/4. Indawo yangakini iphephile kakhulu futhi ilungele ukuhambahamba kusihlwa emgwaqweni.
My wife and I became the hosts of the 1884 Red Brick Cottage when the house became available for sale in 2018. We fell in love with the simple charm of this beautifully crafted ho…
Sitholakala noma kunini futhi sitholakala endaweni eqhele nge-1/2